ဇီးရိုးတူဝမ်း – Pann Satt Lann Books
ဇီးရိုးတူဝမ်းဟာ စွန့်ဦးတီထွင် လောကသားများ (အထူးသဖြင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုကို စတင်တော့မယ့်လူတွေ) အတွက် ၂၁ ရာစု အလေးထားဆုံး စာအုပ် ၁၀ အုပ်မှာ တစ်အုပ် အပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် အခုလို အလေးထားရပါသလဲ?
ယခု စာအုပ် ဇီးရိုးတူဝမ်းကို ရေးသားသူ သီအဲ့လ်ဟာ ဆီလီကွန်တောင်ကြားရဲ့ ပွဲတိုင်းကျော်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ စွန့်ဦးတီထွင်သူနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ပီတာ သီယဲလ်တစ်ယောက် ကုမ္ပဏီ အမြောက်အမြားမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့တဲ့ သူ့အတွေ့အကြုံတွေကို အခြေခံပြီး ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ် ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
ဒီစာအုပ်စတင်ထွက်ရှိချိန်မှာ ဆီလီကွန်တောင်ကြားနဲ့ စီးပွားရေးလောကကြား စာအုပ်ပါ အကြောင်းအရာတွေကို အများအပြား ဆွေးနွေးငြင်းခုံခဲ့ကြပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ဆွန်ဇူးရဲ့ သေနင်္ဂဗျူဟာကျမ်း၊ ဒါဝင်ကျမ်းများကို လက်စွဲပြုတတ်ပြီး ရင်ဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းကို အလေးထားကြတဲ့ လက်ရှိ စီးပွားရေးလောကသားတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်ဟာ မှားယွင်းပြီး ဘယ်လို အတွေးအခေါ်မျိုးက အနာဂတ်မှာ အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ထွန်းနိုင်မယ်ဆိုပြီး သူခန့်မှန်းပြထားတဲ့ ပုံစံကြောင့်ပါပဲ။
စာရေးသူဟာ သူရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းများစွာအရ အောင်မြင်မှုကို ရယူပေးနိုင်မယ့် ဖော်မြူလာဆိုတာ မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီအစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို အခြေခံမူများဖြင့် စတင်ရမယ်လို့ အခိုင်အမာ ဆိုပါတယ်။ ဒါဖြင့် စာရေးသူပြောတဲ့ စီးပွားရေး အခြေခံမူများဟာ ဘာတွေလဲ။
အရာရာ ထပ်ဖန်တလဲလဲ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ကမ္ဘာကြီးမှာ အောင်မြင်ပြီးသား လုပ်ငန်းတွေအတိုင်း ပုံတူကူးချတဲ့အခါ သင့်လုပ်ငန်းသာမက ကမ္ဘာကြီးအတွက်ပါ ဘာဖြစ်သွားနိုင်မလဲ။ အဲ့ဒီအစား ယခင်က တစ်ခါမှ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဖူးခြင်း မရှိသေးတဲ့ တီထွင်မှုအသစ်တစ်ခုကို စတင်ဖန်တီးတဲ့အခါ ဘယ်လို ဖြစ်ပျက်သွားနိုင်သလဲ။ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းအဆင့် တစ်ခုစီတိုင်းအတွက် သီယဲလ် သုံးသပ်ပြထားပုံ၊ ယခင်ဖြစ်ပြီးသား အခြေအနေတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ် တွက်ချက်ပြထားပုံတွေဟာ စီးပွားရေးသမားတိုင်းအတွက် အထူးဂရုပြု လေ့လာစဉ်းစားစရာတွေ အပြည့် ဖြစ်ပါတယ်။
သီယဲလ်ဟာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု စတင်တဲ့အခါ
– အသုံးပြုသူ တိုးပွားစေနည်း
– ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့ ပြိုင်ဘက်များကို ချဉ်းကပ်နည်း
– စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု စဉ်းစားရမယ့် အခြေခံမူများ
– အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်နဲ့ အနာဂတ်ကြား မိမိ လုပ်ကိုင်သမျှကို စဉ်းစားသင့်ပုံ
အစရှိတဲ့ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အတွေးလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ဘယ်လို စဉ်းစားသင့်ကြောင်း ယခုစာအုပ်မှာ ပြောပြသွားပါတယ်။
မဟာစာပေ 2021 ဒီဇင်ဘာလ (တ-ကြိမ်)
“ဇီးရိုးတူဝမ်း” စာအုပ်အပေါ် လူကြီးမင်း၏ အမြင်ကို ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်ပါသည်... Cancel reply